Mmelite Google jiri ọnọdụ gbara ọchịchịrị dobe na Kalịnda | Androidsis
Google ewela obere oge iji nyochaa nnweta nke ọchịchịrị mode abụọ nke ya ngwa: Kalinda na Nọgidenụ. Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-agagharị ugbu a nke anyị nwere ike ịhụ n'ọtụtụ ngwa na usoro akwa.
N'ụzọ dị otú a ahụmịhe kachasị mma na ọnọdụ ọkụ site na mbenata nchapụta nke ihuenyo anyị. N'ezie, Samsung turu ọnụ maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke Otu UI ya, usoro mkpuchi ọhụụ dị na Galaxy.
Na ihe niile na-eme taa na Android na Huawei isiokwu, na nke ahụ enwere ike nzaghachi site na akara ndị China, nnukwu G dị nnọọ mara ọkwa na ọchịchịrị isiokwu nnweta maka ngwa abụọ ahụ a na-etinyekarị ya na nde ngwaọrụ gburugburu ụwa.
Ọchịchịrị isiokwu nwere ike rụọ ọrụ na aka site na ọrụ na Kalinda dị ka nke a:
Anyị na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Okwu na ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị na Kalinda na-arụ ọrụ.
Otu anyị ga-eme na Google Nọgidenụ, ọ bụ ezie na ụzọ maka nke a dị mkpụmkpụ:
Anyị na-aga Ntọala ma rụọ ọrụ Ọnọdụ Ọchịchịrị.
Ikwesiri imata na mmelite a esiteghi na ihe nkesa, kama anyị nwere imelite ngwa abụọ ahụ nke mere na ọ na-emetụta ma anyị nwere ike ịgbalite nhọrọ a n'onwe anyị maka igosipụta ọdịnaya.
Mmelite abụọ ga-abata site taa rue ụbọchị iri abụọ ma ọ bụ karịa. Ihe na-ato ochi bu na unu niile ndi no na akwukwo a Gam akporo Q ga-eme ka ọ rụọ ọrụ na ndabara ma otu a ka ị ga-esi chekwaa itinye gị n’onwe gị.
Abụọ ngwa ọtụtụ-eji ọtụtụ na ugbu a nwere ọnọdụ gbara ọchịchịrị iji jiri anya nke uche hụ ahụmịhe ha na-enye, ma jikwaa usoro ihe omume ma ọ bụ ichekwa ndetu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ọnọdụ gbara ọchịchịrị dịkwa maka Kalinda na gam akporo